‘ပ’ အက္ခရာနောက်ပိုင်း နံပါတ်အနီကားများ အခွန်လျှော့နှုန်းထားဖြင့် ကားသစ်တင်သွင်းခွင့် ရမည် | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1129)	Sedan (322)
Home » News » ‘ပ’ အက္ခရာနောက်ပိုင်း နံပါတ်အနီကားများ အခွန်လျှော့နှုန်းထားဖြင့် ကားသစ်တင်သွင်းခွင့် ရမည်
‘ပ’ အက္ခရာနောက်ပိုင်း နံပါတ်အနီကားများ အခွန်လျှော့နှုန်းထားဖြင့် ကားသစ်တင်သွင်းခွင့် ရမည်
admin | News | April 29, 2012
ကားဟောင်းများ အပ်နှံရာတွင် ‘ပ’ အက္ခရာနောက်ပိုင်း နံပါတ်အနီနှင့် ကားများအားလုံးကို အငှားယဉ်အဖြစ် ပြန်လည် ပြုလုပ်လိုပါက အခွန်လျှော့ပေးပြီး ပြည်ပမှ ကားသစ်များ တင်သွင်းခွင့် ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Eleven Media Group အရသိရှိရပါသည်။ ယခုကောက်ခံနေသည့် အခွန်နှုန်းများထဲမှ မည်သည့်အခွန်အား မည်မျှ လျှော့ချကောက်ခံမည်ကိုမူ တိတိကျကျ မသိရှိရသေးပါ။ အဆိုပါ သတ်မှတ်ချက်ထဲတွင် နံပါတ်အနီနှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကားများ အားလုံးပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး မီနီဘတ်စ် နှင့် Tour ကားများပါ ပါဝင်သည်ဟု သိရပါသည်။ (Photo: Flickr)
3,674 total views,2today Print
15 Responses to “‘ပ’ အက္ခရာနောက်ပိုင်း နံပါတ်အနီကားများ အခွန်လျှော့နှုန်းထားဖြင့် ကားသစ်တင်သွင်းခွင့် ရမည်”
Myo Min on April 29, 2012 @ 3:25 pm မေးကြည့်ပေးကြပါအုံးဗျာ,ဇုန်ထုတ်ဂျစ်ကားတွေလဲဘယ်တော့ပြန်အပ်မဲ့ထဲပါမလဲဘာလိုလဲဆိုတော့ခတ်နဲ့လျှော်ညီမူမရှိလို့ပါမောင်းသာမောင်းနေရတယ်ရင်တုန်ပန်းတုန်ပဲ
Reply Aung Naing on May 4, 2012 @ 3:21 pm အစထဲက၀ယ်စီးမိတာကအမှား။
Reply Nyunt Aung on May 18, 2012 @ 2:02 am best suggestion for you. sell out that Set-hmu zone jeep, and add 100 lakhs,now u can getadecent car(Honda fit= 175 lakhs only).
Reply Aung Htay on April 29, 2012 @ 3:51 pm ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ စဉ်းစားပေးသင့်ပါတယ်။
Reply Phyusin Chanmyae on April 29, 2012 @ 4:52 pm ဒါဆိုမီနီ..ချယ်ရီတွေဈေးကျတော့မှာပေါ့
Reply Aung Naing on May 4, 2012 @ 3:15 pm ဘယ်နစီးတောင်၇ိလို.လဲ
Reply Nyunt Aung on May 18, 2012 @ 1:54 am mini-saloon real price=5.5 million kyats only. QQ3(or)Cherry= 580 US$ FOB China. So, just imagine how much we(ordinary citizens of Myanmar)were exploited ?
Reply Moe Pa Pa Win on April 30, 2012 @ 2:58 am တရုတ်ကား(မီနီ၊ချယ်ရီ) တွေတော့ ဂျပန်ကားနဲ့ ယှဉ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး.. အရည်အသွေးကော ကြံခိုင်မှု ကော အများကြီးကွာတယ်လေ..
Reply Aung Naing on May 7, 2012 @ 9:49 am သြခုမှသိ၇လား မမမိုးပပ၇ဲ.
Reply Nyunt Aung on May 18, 2012 @ 2:00 am since high ratio of Melamine in Chinese Milk Powder,we all should know what kind of mind-setting Chinese Manufacturers have on Myanmar Consumers/Customers. Let us boycott Chinese Products. Do u think the quality China sold to USA and EU is same quality as they sold to Myanmar.? That's what we called China.
Reply Min Thein on May 1, 2012 @ 9:56 pm သုံးဘီးကားလေးတွေရော့ ပြန်မလဲပေးတော့ဘူးလားဗျာ…..
Reply Aung Naing on May 4, 2012 @ 3:19 pm စဉ်းစားနေပါတယ်။ ယိုးဒ၇ားက တုတ်တုတ်နဲ.လဲပေးဘို.တံတားတွေဆောက်ုပြီး၇င်။ ထောလာကြည်တော.မသေချာသေးဘူး။
Reply Mc K Lwin on May 2, 2012 @ 7:01 am နံပါတ်အနီ တွေကတော့ဟုတ်ပါပြီ ပ နောက်ပိုင်း အက္ခရာကားတွေကရော အပ်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသေးလား မသိဘူး…
Reply Aung Naing on May 4, 2012 @ 3:24 pm မုကြာမှီလာမည်မျော်။ ပွဲစားတန်းအသစ်ေ၇ာက်၇င်။ ခု၇ပ်စ၇ာနေ၇ာမ၇ိသေးလို.ပွဲစားတန်းမှာ။ေ၇ာင်းချင်တဲ.လူတွေကြီးဘဲ။
Reply Thein Aung Thein Aung on June 7, 2012 @ 6:26 am ကားဆိုရင်ဘာကားမှစိတ်မဝင်စားကြပါနဲ့..သားသားတို့ကားအစုတ်လေးလွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကဝယ်ထားတာ..အခုသိန်၂၀ရှုံးသွားပြီ…နောက်ထပ်စ စလုံး ၂နှစ်လောက်ကျွန်ခံရအုင်္းမယ်…အရမ်းချမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဝယ်ကြပေါ့..ကားဆိုသလေက်ကားတယ်..ဟိဟိ….
by Hla Myo on 20 hours ago -2Comments
by Hla Myo on 21 hours ago - 14 Comments
Honda Civic 2010 Owner's Manual	1300 cc car Tyres	Good Morning Everyone	Toyota Hilux Surf	mitsubushi lancer evolution 8, 2000cc	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများNissan AD Van (66 views)MAZDA RX-8(2007)(135lakhs) (58 views)TOYOTA MARK II 2.0 (48 views)Nissan Infinity 2004 model (47 views)HONDA FIT GE6 2010 GRADE 4.5 (47 views)Pajero IO (46 views)Toyota Ipsum (40 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (39 views)Sunny Super saloon (38 views)TOYOTA MARK II 2.5 (34 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.